Ngempela mina soulmate ubuso noma amehlo, ezifana imvukuzane yesikhundla zifana?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngempela mina soulmate ubuso noma amehlo, ezifana imvukuzane yesikhundla zifana?
Ingabe ukuba khona ukuqinisa imiphefumulo yabo, ngumuntu soul mate, ezifana wazizwa futhi akufanele kube ngaphandle. Noma unomuzwa endaweni ethile ISIFISO sihlangana mate umphefumulo, indaba ukuthi iwela umuzwa ongavamile enjalo noma wazinza ngasizathu simbe futhi kokuba ngokuvamile ndawonye lizwakele. Uma kukhona umuntu onjalo, sicela uzame olandelayo ukuhlola izici zomzimba.
ngoba, ngoba ngokuvamile kuba soul mate ukuthi ungathi izici zomzimba esihle. Uma kukhona iphuzu ovamile izici zalesi iveni emzimbeni, kuba ukuthi umuntu kungenzeka ukuba umngane umphefumulo. Uma sensuously kamnandi uze Abanye abantu banomuzwa, kungase kube iphuzu ezivamile imizimba yabo futhi akumangalisi lokhu.
okunjengalokhu kube ingxenye
kube mate umphefumulo nje ezifanayo, isibonelo, kuyinto mate umphefumulo ibizwa ngokuthi lapha ziyafana yini izingxenye ezinhle, njengalezi ezilandelayo.
Ngokwesibonelo, kukhona indawo okuyinto efana ingxenye, ukuma iso, ekhaleni nokuzwakala emlonyeni, futhi, ezifana umgogodla, kunezindlela eziningi ukuthi iyafana uma uqhathanisa ingxenye kuphela. Ngoba hhayi ukuthi ubuso iyafana lonke, kunzima ukuqonda Uma unganakile, kodwa uma hlola ingxenye enhle, kungase kube ingxenye okungukuthi ngokumangalisayo ngendlela efanayo nowabo.
? izandla nezinyawo ukuma kuyafana
Lokhu kubuye ingxenye encane umzimba, kodwa kubonakala sengathi kukhona ukuthi zifana kakhulu ngesimo ezandleni nasezinyaweni. ukuma jikelele nje kuphela, kodwa kunjalo futhi wathola ukuthi nje uthanda kuze kube umunwe kanye ukuma izinzipho, entendeni ukufunda. Uma kukhona lapho ungahlola ezandleni nasezinyaweni, sicela nakanjani zama kuqhathaniswa bebodwa.
? imvukuzane kuyinto indawo
indaba eziyinqaba nokulinyazwa, kodwa uma unayo imvukuzane noma Birthmark wena noma kukhona noma mayelana lowo isikhundla, noma isikhundla wesimethri (lesinesitfombe-sibuko). Lokhu futhi kuthiwa zenzelwa soul mate nomunye Okusizayo ukuqinisekisa ubukhona bayo, ngeke wenza uphawu olucacile.
Okunye izici D_ ? Izinwele kuyafana, futhi zihlanganisa ukuthi izinga izinwele kuyafana. Kubonakala futhi, ezifana izinwele umbala kanye ubulukhuni, esimweni ezisontekile ungakwazi umkhuba ukuthi sifana.
kube lo muntu? Futhi kuyinto
soul mate Ake sihlole ukuthi uma uzwa, ngoba lokho nomunye bakhangwa ngokwemvelo kusukela ngesikhathi sihlangana, ungase ube kakade uyazi enye inhlangano ukuthi soul mate ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona isici ingxenye esifana nesika-siqu sakhe lesi sikhathi ukuthi Yethulwa ngokobana umzimba, baze bakholwe umngane womshado umphefumulo nakakhulu.
umzimba, kuyoba iphuzu ukuhlola ukuthi umuntu umngane womshado umphefumulo kalula. Uma kukhona abantu abaye baba abantu emoyeni-fuel abapholayo manje, uma uthola indawo ethi ayifane naleyo bebodwa, kunconywa ukuthi uya unakekele ukuba bazakhele ubuhlobo naye.